Awood Soosaarid - Warshad Macdan Qingdao TianHua Yihe
Qalabyada lagu farsameeyo birta waxaa loo isticmaalaa howlaha been abuurka sida jarista, foorarinta, alxamida iyo dahaadhka iwm. Qalabkani waa inuu noqdaa mid tayo sare leh oo ay la tacaali karaan been abuur u qalma. Qalabkan waxaa loogu talagalay khubaro si ay ula tacaalaan nashaadaadka biraha dhamaadka sare. Xarumaheenna macdanta ee birta ah ayaa noo oggolaanaya inaan ka shaqeyno qaybo ballaaran oo shaqooyin ah. Waxaan awood u leenahay in aan been abuurno shaqo yar oo isku dhafan oo ay ka mid yihiin iimaan sare oo ka kooban qalabaysan.
Mashiinka feerka CNC waxaa loogu talagalay taarikada qaro weyn ee 0.5mm-3mm, max. dhererka goynta waa 6000mm, max. ballacuna waa 1250mm. Mashiinka goynta laser-ka waxaa loogu talagalay 3mm-20mm taarikada qaro weyn, ugu badnaan. dhererka goynta waa 3000mm, max. ballacuna waa 1500mm. Mashiinka jarista ololka waxaa loogu talagalay 10mm-100mm taarikada qaro weyn, ugu badnaan. dhererka goynta waa 9000mm, max. ballacuna waa 4000mm.
Waxaan haynaa 4 qaybood oo foorarsiga mashiinka ah, 3 nooc oo loogu talagalay birta xaashida ah, 1 loo dhigay bir culus. 0.5mm-15mm taarikada, max. dhererka foorarsiga dhererkiisu waa 6000mm, ugu badnaan culeyskiisu waa 20 tan.
Waxaan leenahay 4 dhuxul oo alxam ah, 1 alwaax alxam ah, 2 nooc oo wareegyada alxamida, 6 EN walder shahaado si loo hubiyo farsamooyinkayaga alxanka u qalma. Been abuur culus ayaa u baahan adeegsiga nooca saxda ah ee alxamida si loo hubiyo jiritaanka qaab dhismeedka. MIG, TIG, Oxy-Acetylene, alxanka qaansada qafiifka ah, iyo qaabab kale oo alxam ah oo badan ayaa loo heli karaa si loogu amaano noocyada gaarka ah ee biraha iyo dhumucda aad u baahan doonto inaad soo saarto qalabka aad u baahan tahay.
Waxaan leenahay khad rinjiyeyn u gaar ah oo buuxiya shuruudaha deegaanka ee dowladda, si loo bixiyo hal-joogsi been abuur ah oo loogu talagalay macaamiisha shuruudaha kala duwan. Qarxinta xabbaddu waxay u diyaarisaa qaybo bir ah si loogu sii shaqeeyo sida rinjiga ama dahaadhka budada. Tallaabadani waa lagama maarmaan si loo hubiyo in jaakadu si sax ah ugu dhegto qaybta. Qarax toogasho ah wuxuu nadiifin karaa wasakhda sida wasakhda ama saliidda, wuxuu ka saari karaa oksaydhka biraha ah sida miridhku ama miisaanka wax lagu shiido, ama wuxuu dusha ka saari karaa dusha sare si uu u noqdo mid siman. Dahaarka budada, rinjiyeynta, sandblasting iyo beadblasting is iska leh, iyo galvanization waxaa lagu sameeyaa meesha ka baxsan iyadoo la isticmaalayo ganacsiyada maxalliga ah.
Kormeer ay sameysay mid ka mid ah dhowr kormeerayaasha alxanka ee AWS ee la aqoonsan yahay ayaa ah tillaabada ugu dambeysa ee been abuurka bir kasta oo bir ah. Qiimeyntani waxay daboolaysaa walxaha, cilladaha maaddada, filimka daboolka iyo dhowr dhinacyo kale. 100% walxaha si muuqaal ah ayaa loo baaraa. Kormeerka Xiinka iyo Baadhitaanka Qaybta Magnetic-ka waxaa la sameeyaa marka loo baahdo Tilmaamaha Mashruuca ama nambarka dhismaha. Marka lagu daro oggolaanshaha kama dambaysta ah, waaxda QC waxay maamushaa oo ka caawisaa been-abuurka si loo hubiyo in dhammaan xeerarka iyo nidaamyada la raaco.
Waxaan hirgelinay nidaam koodh lagu qoro oo loo adeegsado raadinta wax soo saarka dukaanka dhexdiisa iyo sidoo kale soo saarista tikidhada dhoofinta. Nidaamkani wuxuu hagaajiyaa saxsanaanta wuxuuna kordhiyaa waxtarka. Tilmaamahan aadka u muuqda si dhakhso leh oo fududna ula socodsiiya macluumaadka saxda ah shaqaalaha dukaanka iyo duurka labadaba. Waxaan diyaar u nahay horusocod dheeri ah oo ku saabsan aaggan si aan ula kulanno shuruudaha macaamiisha.
Iyadoo la adeegsanayo forklifts iyo wiishashka, walxaha dhammaaday ayaa si ammaan ah loogu raraa gawaarida waaweyn si loogu diro dekedda xamuulka Waxaan haynaa alaab lagu cayimay nidaamka dhoofinta si ay ula jaan qaadaan shuruudaha ganacsi ee kala duwan ee EXW, FOB, CIF, DDU iwm.